साथीको साथ :: रुविआ पराजुली :: Setopati
साथी बिनाको जीवन सोच्न सम्भव छ र?
हामीलाई अफ्ट्यारो पर्दा साथ दिने, हामी रूँदा हाम्रो आँसु पुछिदिने, हामी हाँस्दा सँगै हाँसिदिने भनेकै असल मित्रको पहिचान हो। साथी त हामीलाई हरेक पल चाहिन्छ। प्यारा साथी बिना त स्वास फेर्न पनि सम्भव छैन।
सगरमाथा चढ्दा होस् वा सगरमाथाबाट तल ओर्लदा, त्यहाँ साथीको ठूलो भुमिका रहेको हुन्छ। हामीले धेरै महान व्यक्तिको नाम सुनेका छौ। उनीहरू पनि साथी बिना पक्कै सफल भएका होइनन्।
हाम्रै कक्षामा पढ्ने मान्छेलाई मात्रै साथी भानिदैनन्। साथी त ती हुन् जसले हामीलाई जतिखेर साथ दिन्छन् र सहयोग गर्छन्। कहिलेकाहीँ त हाम्रा आमाबुवा र शिक्षक पनि हाम्रो साथी बन्नु हुन्छ। साथी हामीभन्दा ठूला अथवा साना कक्षाका पनि हुन सक्छन्।
रामायणमा सुग्रिव र राम साथी थिए। सुग्रिवले रामलाई रावणसँग युद्ध गर्न जाँदा आफ्नो सेना रामलाई दिएका थिए। अनि अरू धेरै सहयोग गरेका थिए। रामले पनि सुग्रिवलाई उनको दाई (जसले उनीमाथी अन्याय गरेका थिए) बलीको हत्या गरी बलीलाई न्याय दिलाएका थिए। त्यतिबेला रामले सुग्रिवलाई र सुग्रिवले रामलाई सहयोग नगरेको भए उनीहरू दुबै सफल हुँदैन थिए होला।
महाभारतमा कर्ण र दुर्योधन एकदमै मिल्ने साथी थिए। बिस्तारै-बिस्तारै कर्णले थाहा पाउन थाल्यो कि ऊ पाण्डवहरूको जेठा दाई थिए। तर पनि उनले युद्धमा पाण्डवको साथ लिएनन्। आफ्नो प्यारो मित्र दुर्योधन कै साथ लिए। आफ्नो अन्तिम स्वाससम्म दुर्योधन कै समूहमा साथ दिएर लडे। यसरी महाभारतका कर्ण जस्तै हामीले पनि हाम्रो साथीको साथ दिइनै राख्नु पर्छ।
तर, यो भनेर हामी नराम्रो साथीलाई साथ दिने भनेको होइन नि! राम्रो साथी खोज्ने हाम्रो नै कर्तव्य हो। हामीले राम्रो साथी छान्न सकेनौं भने हामीलाई अफ्ट्यारो हुन्छ र हामी राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्दैनौं। कर्णले असल साथी छान्न पाएन किनभने दुर्योधनले विभिन्न जाल गरेर कर्णलाई आफूतिर तान्यो।
कर्णले आफू नराम्रो साथीको संगत गर्दैछु भन्ने कुरा थाहा पाएको थिएन। उसलाई बिस्तारै दुर्योधनमाथि विश्वास लग्न थाल्यो। बिस्तारै-बिस्तारै युद्ध गर्ने बेला आयो। अनि कर्णले दुर्योधन साथ दिने भयो। उसले बिस्तारै थाहा पाउन थाल्यो कि ऊ पाण्डवहरूको जेठा दाई हो।
हामीले साथीलाई दिएको वचन पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले, उसले आफ्नो प्रिय साथीलाई वचन दिई सकेकाले पाण्डवको साथ दिएनन्।
साथीहरू बीचको सम्बध एकदमै बलियो हुनुपर्छ। साथीहरूसँग नराम्रो सम्बध हुन कहिल्यै दिनु हुँदैन किनभने त्यसले हामीलाई एकदमै पछाडि पुर्याउँछ। साथी बिनाको जीवन त काँडा जस्तै तिखो हुन्छ। हामी साथीसँग झगडा गर्नु हुँदैन। उनीहरूसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्नुपर्छ। अनि बल्ल हाम्रो जीवन गुलावजस्तै राम्रो बन्न सक्छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २१, २०७८, ०७:२४:१९